I-Montepulciano Tartufaie | I-Montepulciano truffle Ercolani
Hambani ngama-truffles ... lokhu kuyisifiso esinempilo futhi esingajwayelekile sentsha yangaleso sikhathi uCarlo noMarco, manje abangabanikazi abaziqhenyayo bepulazi Ercolani. I-Passion manje futhi egqamisa izingane, kanye nesifiso esivamile sokuvikela izindawo zemvelo. Ngenxa yeqoqo eligciniwe le-truffles, izindawo eziningi zenkampani yethu nezendawo yaseMontepulciano zivikelekile ekuqothulweni kwamahlathi, ekusetshenzisweni kwama-herbicides nasekulahlekelweni yimvelo okungenakugwenywa manje.
Kuwo wonke unyaka, ezinyangeni ezigunyazwe ukuvuna, ungabamba iqhaza ekusesheni ama-truffles. Ekupheleni kwesipiliyoni kuzokwazi ukuthenga i-truffle esisanda kutholwa noma kungani kungenjalo, vumela ukulingeka ngokupheka okungokwesiko okumnandi endaweni yokudlela yaseLa Corte Medicea ukuze unambithe wonke umzimba wesitsha esihle ne-truffle entsha: umvuzo ofanelekile ngemuva komzamo wokusesha!
Ukubamba iqhaza ekusesheni kwama-truffles, thintana noSimone Ercolani esitokisini + 39 338-8895084